SEO र सामग्री मार्केटिंग एकीकरण: प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने एउटा तरिका - Semalt बाट अंतर्दृष्टि
इन्टर्नेटमा एक मजबूत ब्रान्ड एकदम महत्त्वपूर्ण छ, र सामग्री मार्केटि it यसको निर्माण गर्ने मार्गमा माइलस्टोन हो। जे होस्, त्यो सबै होइन, त्यस बाहेक, एसईओ एकीकरण आवश्यक छ।
समकालीन उपभोक्ताले विभिन्न प्रकारको सामग्रीको साथ एक मजबूत संतृप्ति अनुभव गर्दछ। बेकारका सन्देशहरूको विरूद्धको बचाउमा, उहाँ आकर्षक र रोचक जानकारीको खोजी गर्नुहुन्छ। एकचोटि, पहिलो, उसले ध्यान दियो, दोस्रो, उसले चासो जगायो, र तेस्रो, उसलाई लाभ। सामग्री मार्केटिंग यस आवश्यकताको जवाफ हो।
आज, आकर्षक र अद्वितीय सामग्री सर्वोच्च शासन गर्दछ, जो एक आकर्षक फाराममा प्रापकमा पुग्छ। को संयोजन SEO र सामग्री मार्केटिंग प्रयोगकर्तालाई मूल्यवान सामग्री प्रदान गर्दछ र परिणाम स्वरूप उनीहरूको सन्तुष्टि बढाउँदछ।
सुरुमा, आफैलाई सोध्नु उचित हो कि एसईओ र सीएमको साझा लक्ष्यहरू छन्। ठिक छ, तिनीहरूसँग छ, र तिनीहरू मध्ये सब भन्दा महत्त्वपूर्णहरू:
मूल सामग्री सिर्जना गर्दै,
प्रयोगकर्ताको लागि बहुमूल्य सामग्री सिर्जना गर्दै,
वेबसाइट ट्राफिक बढाउँदै,
ब्राण्ड जागरूकता बढाउँदै,
निर्माण ब्रान्ड अधिकार,
रूपान्तरणको संख्या बढाउँदै।
SEO र सामग्री मार्केटिंग
यो वास्तवमा कस्तो देखिन्छ?
कीवर्ड/वाक्यांश र सामग्री
पहिलो, आधारभूत कुरा - SEO मा शब्दहरू, मुख्य वाक्यांशहरू, सामग्री समावेश छन्। सामग्री मार्केटिंग उपभोक्तासँग कुरा गर्दैछ, उसलाई शिक्षा दिँदै, र बिभिन्न प्रकारहरूमा सामग्रीको प्रयोग गरेर मनोरन्जन प्रदान गर्दै। तपाईंले याद गर्नुपर्दछ कि आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्नुका साथै तपाईंले यसलाई वितरण पनि गर्नु आवश्यक छ, अर्थात् प्रयोगकर्ताहरू यसलाई फेला पार्नुहोस्।
राय नेताहरूमा पुग्दै, सोशल मिडियामा प्रमोट गर्दै, ब्रान्डेड प्रकाशनहरू मार्फत सम्बन्ध निर्माण गर्ने - यी सामग्रीहरू फैलाउने र यसलाई गुगल खोजी ईन्जिनमा उच्च प्राप्त गर्ने केही तरिकाहरू छन्। यो, हामीलाई थाहा छ, आवश्यक छ। कुन सामग्री अत्यधिक श्रेणी हुनेछ? सबै भन्दा माथि, ती:
प्रयोगकर्तालाई केन्द्रमा राख्नुहोस्,
अद्वितीय र आकर्षक छन्,
नेत्रहीन आकर्षक छन्,
उपलब्ध र पत्ता लगाउन सजिलो छ,
प्रापकका लागि थप गरिएको मानहरू समावेश गर्दछ,
सामग्रीको उचित संरचना धेरै महत्त्वपूर्ण छ। वेब लेखनको नियमहरूको पालना गर्दा तपाईंलाई अधिक रुचि प्राप्तकर्ताहरू जम्मा गर्न अनुमति दिनेछ, र यसरी मूल्यवान ब्याकलिlin्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पाठको उदाहरणका लागि भिडियो सामग्री, अन्य चाखलाग्दो स्रोतहरूमा लिंकहरू, अनुच्छेदहरूमा विभाजित हुन्छन् वा बुलेटहरू समावेश गर्दछ, एक समान संरचनाको साथ सामग्री भन्दा धेरै राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्दछ।
यहाँ पाठको लम्बाईको भूमिकालाई जोड दिन पनि लायक छ। कुनै फलामको नियमले वर्णहरूको निर्दिष्ट संख्या परिभाषित गर्दैन, तर लामो सामग्री निश्चित रूपमा उच्च स्थानमा राखिन्छ। Www.quicksprout.com को रिपोर्ट अनुसार गुगलले २००० शब्द भन्दा लामो लामो सामग्रीको कदर गर्छ। अधिक के हो, डाटाले पनि पुष्टि गर्दछ कि खोजी क्रमको पहिलो पृष्ठले परिणामहरू समावेश गर्दछ जुन कम्तिमा २,००० शब्दहरूको सामग्रीसँग लिंक गर्दछ।
त्यसकारण सामग्रीमा शव्दहरूको संख्या र यसमा नेतृत्व गर्ने लिंकहरू बीच कडा सम्बन्ध छ। सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिले यसैले पाठ, लेख, र पोष्टको सिर्जना समावेश गर्नुपर्दछ जुन रोचक र अद्वितीय मात्र होइन तर पर्याप्त धनी पनि छ। अवश्य पनि, तपाइँ कम्पनीको वेबसाइट को बारे बिर्सनु हुँदैन, जुन प्रभावी ढ position्गमा स्थित हुनुपर्दछ, जस्तै। उपयुक्त प्रकाशनहरू मार्फत।
खोज ईन्जिनहरूले सामग्री मन पराउछ जुन व्यक्तिले मन पराउँछन्। सामूहिक प्रतिलिपि गरिएको सन्देशहरू सिर्जना गर्ने काम आज छैन। राम्रो सामग्रीको राम्रो संकेतकहरू छन्: लामो पृष्ठ समय र कम बाउन्स रेट। यो खोज ईन्जिनको लागि स्पष्ट संकेत हो जुन प्रयोगकर्ताले उनीहरूको प्रश्नको जवाफ पायो। उत्तम सामग्रीको अर्थ अधिक प्रभावकारी हुन्छ SEO, र सामग्री मार्केटिंग स्रोत हो।
मुख्य वाक्यांश र सामग्री मार्केटिंग
यसमा कुनै श is्का छैन कि खोजशब्दहरू सफल अप्टिमाइजेसनको आधार हुन्। हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छौं, खोजी ईन्जिनमा तिनीहरूको स्थिति खोजी र ट्र्याक गर्दछौं। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्नु हो। कुञ्जी वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूका लागि लेखिएका आकर्षक सामग्री शक्तिशाली स्थिति उपकरण हो।
कुन शब्द उपभोक्ताहरूले खोजिरहेका छन् भनेर कसरी जाँच गर्ने?
सधैजसो, एक वेबसाइट विश्लेषक मद्दत गर्न सक्छ। गुगल वेबमास्टर्स उपकरण (खोज कन्सोल) र गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरूले देखाउँदछ कि कुन वाक्यांशहरू सब भन्दा लोकप्रिय र आकर्षक छन्। खोजी सर्तको सर्तमा ट्र्याक राख्नको लागि एक ठाउँ जीएमा "खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO)" हो। त्यहाँ, तपाईले शब्दहरू विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ जुन सबै भन्दा बढी प्रभावहरू प्राप्त गर्दछ, उच्चतम CTR (क्लिक-थ्रु दर) छ, र खोज परिणाममा कुन औसत स्थिति पृष्ठमा दिइएको छ कुनै दिइएको वाक्यांश प्रविष्ट गरे पछि पत्ता लगाउनुहोस्।
बाट निष्कर्ष विश्लेषण सबैभन्दा बारम्बार प्रयोगकर्ता सोधपुछको साथ सम्पन्न सामग्री सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। लेखहरूको एसईओ अप्टिमाइजेसनमा एचटीएमएल ट्यागमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शब्द राख्नु समावेश गर्नुपर्दछ:
मेटा विवरण (छोटो वर्णन),
मुख्य वाक्यांशहरू सामग्रीमा कति पटक सम्म देखापर्नु पर्छ भन्ने कुनै निश्चित उत्तर छैन। तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नु पर्छ। अवश्य पनि, तपाईले उनीहरूको संतृप्तिलाई अधिक गर्नुहुन्न, गुगलले शब्दहरूको अप्राकृतिक संख्या र उनीहरूका भिन्नताहरूलाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिन्छ। साथै, खोज इञ्जिन एल्गोरिदमहरू अब धेरै उन्नत छन्, तिनीहरू राम्रोसँग प्रस better्ग बुझ्दछन् र समानार्थी लिंक पनि बुझ्न सक्छन्। त्यसकारण, एसईओ अप्टिमाइजेसन योजनालाई विचार गर्नु उचित छ जुन हाम्रो सामग्रीलाई मूल्यवान कुञ्जी वाक्यांशहरूको प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी बनाउँदछ। त्यस्ता कार्यहरूको लागि धन्यबाद, गुगल खोजी परिणामहरूमा स्थायी "ट्रेस" रहनेछ, र एकै साथ, प्रापकहरूले हाम्रो सामग्री अधिक सजीलै फेला पार्नेछन्।
सामग्री मार्केटिंग मूल्यवान ब्याकलिंक्सको स्रोत हो
राम्रो-गुणवत्ता विषयगत लिंकहरू हो, राम्रोसँग परिचित छ, धेरै वांछनीय। सामग्री मार्केटिंगको महत्त्वपूर्ण काम भनेको खोजी ईन्जिनहरूका लागि वेबसाइटहरू अनुकूलित गर्नु हो। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमा आकर्षक र लोकप्रिय सामग्री प्रकाशित गर्न दिइएको पृष्ठमा अग्रणी लि links्कहरू निर्माण गर्न अनुकूल छ, र यसैले, खोजी परिणामहरूमा यसको विश्वसनीयता र स्थानमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दछ।
ब्याकलिks्कहरू संकलन गर्ने उत्तम तरिका भनेको वास्तवमै आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्नु हो जुन प्रकाशन पछि धेरै प्रशंसकहरू ल्याउँदछ। तिनीहरूले, बारी मा, आकर्षक सामग्री को लागी धन्यवाद को रूप मा यो अन्य प्रयोगकर्ताहरु संग साझा गर्नेछ। एक प्रभावी सामग्री मार्केटि। अभियान चलाउँदा प्रभावकारी लिंक निर्माणमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।
मूल्यवान ब्याकलिlin्कहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू के छन्?
सोशल मिडियामा उपस्थित हुनुहोस् - यो लिंकहरूको एक महान स्रोत हो; जे होस् प्रायः मानिसहरूसँग "नफोलो" एट्रिब्युट हुन्छ, सोशल मिडिया प्रोफाइलमा तपाईंको प्रकाशनहरूमा लि to्क गर्नु राम्रो विचार हो किनभने तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट धेरै बहुमूल्य लि links्कहरू पाउन सक्नुहुनेछ जसले तिनीहरूलाई साझा गर्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि ब्लगमा।
पोडकास्टहरू, प्रस्तुतिकरणहरूसँग प्रयोग गर्नुहोस्, प्रासंगिक जानकारीको साथ PDFs प्रकाशित गर्नुहोस्, जसलाई ग्राफिक रूपमा सोचेको फाराममा दिइएको छ - यसले पाठकलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाउँदछ।
अन्य विषयगत ब्ल्गहरू, वेबसाइटहरू, र फोरमहरूमा योगदान दिनुहोस् - तपाईंको पाहुनालाई उच्च गुणको पोष्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, धन्यवाद जुन तपाईं वेबसाइट मालिक, प्राप्तकर्ताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ, र धेरै मूल्यवान ब्याकलिंक प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाइँको ग्राहकहरुलाई न्यूजलेटर को सदस्यता लिन को लागी विकल्प दिनुहोस् ता कि तिनीहरुसँग सँधै नयाँ सामग्रीमा पहुँच छ।
ब्लग चलाउनुहोस् जहाँ तपाई रमाईलो सामग्री पोष्ट गर्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी। वेबिनरहरू - एक विषय छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँको लक्षित समूहको लागि रुचि हुन सक्छ, वेबिनारलाई एक आकर्षक शीर्षक दिनुहोस्, प्रस्तुतीकरणको समयमा, सहभागीहरू बीच कम्तिमा एउटा सर्वेक्षण गर्नुहोस्, धन्यवाद जुन तपाइँले सहभागीहरूलाई पूरा डेटा र जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। रेकर्ड गरिएको सामग्री तपाईंको भविष्यका ग्राहकहरूको लागि पनि रूचि हुन सक्छ।
सुझावहरू, ट्रिभियाका साथ लेख लेख्नुहोस्, समस्याको समाधान वर्णन गर्दै - यसले तपाईंलाई विज्ञको रूपमा उद्योगको परिचय गराउँदछ र प्राप्तकर्ताहरू बीच अधिकार बढाउँदछ जुन प्राप्त जानकारी साझा गर्न र नियमित पाठक बन्न इच्छुक हुनेछ।
स्लाइड सेयरमा तपाईको प्रस्तुतीकरण पोष्ट गर्नुहोस् - यो एक साइट हो जुन गुगलले जानकारीको विश्वसनीय स्रोतको रूपमा व्यवहार गर्दछ। यसको प्रयोग गर। स्लाइडशेयर प्रस्तुतीकरणहरू उपभोक्तालाई एक आकर्षक रूप मा मूल्यवान सामग्री प्रदान गर्न एक तरिका हो। उपयुक्त लक्ष्य समूह चयन गर्न र सक्कली र अद्वितीय प्रस्तुतीकरण सिर्जना गर्न यो पर्याप्त छ। प्रकाशन गर्दा, यो कुञ्जी शब्द सम्झन लायक छ जसले पाठकहरूको ध्यान मात्र आकर्षित गर्दैन तर खोजी इन्जिनमा द्रुत सामग्री फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
लिंक्डइनमा एउटा समूह सेट अप गर्नुहोस् - यसका of०% प्रयोगकर्ताहरू उद्योगहरूका समाचारमा रुचि राख्छन्; समूहमा चाखलाग्दो र विशेषज्ञ पोष्टहरूको व्यवस्थित प्लेसिंगले अद्वितीय प्रापकहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र भविष्यमा सम्भावित ग्राहकहरू जो तपाईंको ब्रान्डको प्रवर्तक हुनेछन्।
तपाईंको सामग्री प्रचार गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि। फेसबुक विज्ञापन अभियानको साथ। यसले तपाईंलाई उपभोक्ताहरूको चासो समूहमा पुग्न अनुमति दिनेछ र तपाईंलाई साझा सामग्री, कमेन्टिंग, र तपाईंको सामग्री लिंक गरेर फराकिलो दायरा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको सामग्री अन्तर्क्रियात्मक बनाउनुहोस् - प्रश्नहरू, क्विजहरू, प्रतियोगिताहरू थप्नुहोस्। यो सबै चासो जगाउँदछ र "कन्भिन्स" प्राप्तकर्ताहरु तपाइँको वेबसाइट मा लामो रहन को लागी। थप रूपमा, तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा एक अन्तर्क्रियात्मक सर्वेक्षण राख्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ बहुमूल्य जानकारी स gather्कलन गर्न अनुमति दिनेछ। नमूना प्रश्नहरू:
तपाइँको दर्शक के पढ्न/हेर्न चाहन्छ?
के उनीहरू तपाइँको साइट मा केहि परिवर्तन गर्न चाहान्छन्?
के तिनीहरूसँग उत्पादको बारेमा कुनै प्रश्न/शंका छ?
कस्ता प्रकारका सामग्रीहरू सबैभन्दा ठूलो रूचि हो?
उत्तरहरूले नयाँ र रमाईलो सामग्रीको लागि विचारहरू प्रदान गर्न सक्दछ। हुनसक्छ उनीहरूलाई धन्यबाद दिनुहोस् जुन तपाईंले वेबसाईटमा परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ जुन उपयोगिता र पढ्न योग्यताको सर्तमा महत्वपूर्ण छन्। यी सबैले ब्रान्डको सकारात्मक छविलाई असर गर्छ, क्लाइन्टसँग कुराकानीलाई सुदृढ पार्छ, र खोज रैंकिंगको सुधारमा योगदान गर्दछ। एक खुसी प्रयोगकर्ता एक खुसी गुगल हो।
साइट को लागी लि leading्क को रूप मा, को पनी यकीन गर्नुहोस् कि ती "dofollow" छन्। "Nofollow" लाई व्यक्त गर्दैन एसईओ को "शक्ति" र वेबसाइटको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउँदैन, त्यसैले Google श्रेणीकरणमा राम्रो स्थितिमा अनुवाद गर्दैन। लिंक एch्करहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् - त्यहाँ कुञ्जी वा ब्रान्ड वाक्यांशहरू हुनुपर्दछ, तर तपाईंको कुञ्जी शब्दहरूलाई ती जबरजस्ती गरेर राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। यसको विपरित, "मनी कुञ्जी शव्द" एch्करहरू धेरै चाँडै पत्ता लगाउन र खोजी ईन्जिन एल्गोरिदमद्वारा दण्डित गर्न सकिन्छ।
एसईओ र सीएम र प्रयोगकर्ता अनुभव
यूएक्स वा प्रयोगकर्ता अनुभव एक शब्द हो जुन वेबसाइटको प्रयोगमा कुल प्रयोगकर्ता अनुभव वर्णन गर्दछ। यो सकारात्मक छ भनेर के देखाउँदछ? सबै भन्दा पहिले, उपभोक्ता सगाई - वेबसाइट मा समय खर्च, रूपान्तरण को संख्या, बाउन्स दर। यो साइट अप्टिमाइजेसनको लागि जिम्मेवार महत्वपूर्ण कारकहरूसँग सम्बन्धित छ। एसईओ हो, कुञ्जीशब्दहरू र लि to्कहरूको अतिरिक्त, एचटीएमएलमा उपयुक्त ट्यागहरूको प्रयोग वा उपयोगी साइट नक्सा (साइटम्याप) निर्माण गर्न।
यी तत्वहरू सीएम संग बलियो सम्बन्ध छ। वेबसाइटमा प्राविधिक परिवर्तनहरूको परिचय प्रयोगकर्ताको लागि खोजी गर्न, चयन गर्न, र "उपभोग" सामग्रीलाई सजिलो बनाउनको उद्देश्य हो। यसका साथै, पाण्डा एल्गोरिथ्मले हामीमा नियाल राख्छ। चाहे वेबसाइट सामग्री का एक विश्वसनीय स्रोत हो, यसले वेबसाइटमा विज्ञापन संख्या र तिनीहरूको आक्रामकता विश्लेषण गर्दछ।
गुगलले ताजा, आधुनिक डिजाइनका साथ मोबाइलका लागि निर्मित वेबसाइटहरूको प्रशंसा गर्दछ। यी सबै ग्राहकहरूको सन्तुष्टि बढाउनको लागि हो। यो ठूलो हो, अधिक गुगलले यसको कदर गर्नेछ र तपाईंलाई यसको खोजी सूचीमा उच्च स्थानको साथ पुरस्कृत गर्दछ।
SEO र CM एकीकरण
इन्टर्नेटमा एक मजबूत ब्रान्ड एकदम महत्त्वपूर्ण छ, र सामग्री मार्केटि it यसको निर्माण गर्ने मार्गमा माइलस्टोन हो। जे होस्, त्यो सबै होइन, त्यस बाहेक, एसईओ एकीकरण आवश्यक छ। यसले तपाईंलाई बहुमूल्य र प्रभावकारी सञ्चार गर्न अनुमति दिनेछ जसको परिणाम वफादार ग्राहकहरू प्राप्त गर्दछ। एसईओ गतिविधियोंको साथ सामग्री मार्केटिंगको संयोजनले तपाईंलाई तपाईंको अभियानहरूको प्रभाव अधिकतम गर्न अनुमति दिनेछ, जसले आरओआई वृद्धिमा अनुवाद गर्दछ। त्यसोभए यसको फाइदा किन लिदैन?
अब हाम्रो ई-वाणिज्य सेवाहरू खोज्नुहोस्।
तपाईंलाई किन ई-वाणिज्यको आवश्यकता छ?
हामी तपाईं ग्राहकहरु ल्याउन
यस प्याकेज भित्र, हामी तपाइँको अनलाइन पदोन्नति रूपान्तरण उन्मुख को लागी तपाइँ को आला को लेनदेन को प्रश्नहरु लक्षित गरी। हाम्रो कार्य भनेको तपाईलाई खरीददारहरू ल्याउने दिमागमा स्पष्ट लक्ष्यको साथ दिमागमा केवल आगन्तुकहरूको भन्दा हो। सबै प्रयोगकर्ताहरू जुन तपाईंको अनलाइन स्टोरहरूमा आउँदछन् उनीहरूका उत्पादहरू, सेवाहरू वा सूचनाको टुक्रामा चासो लिन ग्यारेन्टी गरिन्छ।
तपाई परिणामका लागि भुक्तान गर्नुहोस्
कुनै पनि अनलाइन स्टोरको स्वामित्व भनेको लगानीको सर्तमा माग गर्दैछ। सुरुमा वित्तीय स्रोतहरूको अभावले ब्रेक-इभन पोइन्टमा जानबाट रोक्दछ। हामीले हाम्रो अनुभव र नवीनतम पदोन्नती प्रविधिहरूलाई एक अभियानमा संयोजन गरेका छौं जसले उत्कृष्ट परिणामहरू दिन्छ।
कम आवृत्ति कुञ्जी श्रेणीकरण
हामी तपाइँको ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न कम फ्रिक्वेन्सी कुञ्जी शब्दहरु लक्षित गर्दछौं, किनकि खोज को उनीहरुको उद्देश्य खरीद गर्नु हो। यस प्रकारको वेबसाइट आगन्तुकहरू सब भन्दा लाभदायक प्रस्तावहरू खोज्दछन् र हाम्रो कार्य भनेको उनीहरूलाई तपाईंको ई-शपमा यी प्रस्तावहरू फेला पार्न मद्दत गर्नु हो। हामी तपाइँको कम आवृत्ति प्रश्नहरु लाई बढावा दिन्छौं, ती दर्शकहरु लाई अधिक दृश्यमान बनाउने जुन तपाइँको उत्पादनमा रुचि राख्दछ।
ई-वाणिज्य सेवा दुबै ई-वाणिज्य र खोज इञ्जिन अनुकूलन मा विशेषज्ञता पेशेवरहरू द्वारा ई-शप मालिकहरूको लागि विकसित एक अन्तिम स्ट्यान्ड-एक्लो प्याकेज हो। हामी तपाईंको कोठाको लागि सफलताको परिभाषित कारकहरू राम्ररी मूल्या and्कन गर्दछौं र प्रतिस्पर्धाको स्तर मूल्यांकन गर्दछौं। त्यसो भए हामी यो जानकारी तपाइँको अनलाइन स्टोर को लागी सबै भन्दा प्रभावकारी रणनीति नक्शा गर्न प्रयोग गर्दछौं।
के तपाईंको ई-कमर्स प्रोजेक्टलाई राम्रो क्रमवारी र थप ग्राहकहरूको आवश्यकता छ? केवल Selmalt लाई सम्पर्क गर्नुहोस्